Daawo Sawirada ” Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo xalay kulan casho ah la qaatay Wariyaal gaar ah « AYAAMO TV
Daawo Sawirada ” Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo xalay kulan casho ah la qaatay Wariyaal gaar ah by Maamule b 1 of 1
601 Views Date March 8th, 2014 time 1:09 pm
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa xalay kulan casho ah la qaatay qeybaha kala duwan ee warbaahinta ka howlgasha magaalada Muqdisho, kuwaasoo isugu jiray kuwa gudaha iyo dibadda.
Kulankan ayaa waxaa ku wehliyay Wasiirka Warfaafinta Mudane Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow, iyadoo lagu casuumay qeybaha warbaahinta ee gudaha dalka iyo kuwa caalamiga ah, waxaana kulankan oo qaatay muddo 5 saacadood ah la isku dhaafsaday aragtiyo kala duwan oo ku aadan sidii ay wada shaqeyn dhow u yeelan lahaayeen dawladda iyo qeybaha warbaahinta, ayna u tabin lahaayeen warbixino u roon dhegaha shacabka qeybna ka qaadanaya horumarinta iyo xasilinta dalka.
Ra’iisul Wasaaraha oo furay kulankan ayaa madaxda hay’addaha warbaahinta u sheegay in kulankan uu uga gol leeyahay sidii ay isku baran lahaayeen madaxda warbaahinta isla markaana ay wada shaqeyn dhow u yeelan lahaayeen dawladda iyo warbaahinta, maadaama warbaahintu ay qeyb libaax leh ka qaadato isu soo dhoweynta shacabka iyo dib u dhiska dalka.
“Ujeedada aan idiin casuumay waxa weeye inaan is barano isla markaana wadaagno aragti ku saabsan marxaladda dalka iyo kaalinta warbaahintu ka qaadan karto xasilinta iyo dib u dhiska dalka” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha oo ka hadlayay intii uu socday kulanka cashada sharafta ah ee uu u sameeyey bahda warbaahinta gudaha iyo kuwa caalamiga.
Gabagabadii kulanka ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed, isaga oo xusay inuu aad ugu faraxsan yahay kulanka uu la qaatay caawa warbaahinta wuxuuna xusay in waxyaalihii ay soo jeediyeen warbaahinta in si deg deg ah uu ugu dubin doono golihiisa Wasiirada lana dhaqangelin doono.
“Wariyeyaasha Soomaaliyeed maalin kasta waa la beegsadaa, sababta loo beegsadona waxay tahay kooxaha argagixisadu ma doonayaan runta inaad sheegtaan, waxaana la idiin kaga baahan yahay inaad bulshada ka wacyigelisaan dhibaatada kooxahan iyo sidii loo cirib tiri lahaa” ayuu yiri ugu dambeyntiina Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed.